အွန်လိုင်းစာရင်းသွင်း - အလယ်ပိုင်းဘာသာစကားများကျောင်း, ကိန်းဘရစ်
ကျောင်းအပ် Form ကို
အောက်ကပုံစံနှင့်သင့် application ကိုကျောင်းစေခြင်းငှါစေလွှတ်လိမ့်မည်ဖြည့်စွက်။
(ရှိလျှင်သင်တန်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းစရိတ်ပေါင်းနေရာထိုင်ခင်းဘွတ်ကင်ကြေး၏ 1 တပတ်) ကိုသိုက်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏သင်တန်းစာအုပ်ဆိုင်များနှင့်နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကသင်၏သိုက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါသင့်ရဲ့သင်တန်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းအတည်ပြုနှင့်သင်လက်ခံ၏ပေးစာပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ non-အီးယူကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးကိုဗြိတိန် entry ကိုဗီဇာရရှိရန်အလို့ငှာ၌ဤလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
တစ်ဦး (*) နဲ့မှတ်သား fields လိုအပ်သည်။
မှားနေသော Input ကို
မြို့ / City:*
ပြည်နယ် / ကောင်တီ / ပြည်နယ်:
zip / စာတိုက် Code ကို:*
ကို Select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.အာဖဂန်နစ္စတန်အော်လန်ကျွန်းစုအယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားယူးဘားၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယား၏ Plurinational ပြည်နယ်Bonaire, ဆင့် Eustatius နှင့်ဆာဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘူးဗက်ကျွန်းဘရာဇီးဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂိုကွန်ဂို, အများ၏ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာအိုင်ဗရီကို့စ်ခရိုအေးရှားကျူးဘားရူရာဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖောက်ကလန်ကျွန်းစု (မာလ်ဗီး)ဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေgabonဂမ်ဘီယာGeorgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟာ့ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများသန့်ရှင်းသောဘုရား See (ဗာတီကန်စီးတီးပြည်နယ်)ဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန်၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံအီရတ်အိုင်ယာလန်လူသား၏ကျွန်းဣသရလေအီတလီဂျမေကာဂျပန်ဂျာစီယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကိုရီးယား, ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုရီးယား, သမ္မတနိုင်ငံကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားအာရပ် Jamahiriyaလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုမက်ဆီဒိုးနီးယား၏ယခင်ယူဂိုဆလပ်သမ္မတနိုင်ငံဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesia ၏ပဒေသရာဇ်စတိတ်မော်လ်ဒိုဗာ, သမ္မတနိုင်ငံမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကို, သိမ်းပိုက်ပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcairn-ပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းရိုမေးနီးယားရုရှားပြည်ထောင်စုရဝမ်ဒါစိန့်ဘာသယ်လဲမီစိန့်ဟယ်လီနာ, တက်မြန်းသည့်နေ့များနှင့်ထရစ်စ Da Cunhaစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်မာတင် (ပြင်သစ်အပိုင်း)စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် The ဂရီနီဒိုင်းဆာမိုအာဆန်မာရီနိုစဝ်တုန်နှင့်ပရဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံစိန့်မာတင် (ဒတ်ချ်အပိုင်း)ဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာနှင့် The တောင် Sandwich ကကျွန်းစုတောင်ပိုင်းဆူဒန်စပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayenဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားအာရပ်သမ္မတနိုင်ငံထိုင်ဝမ်တရုတ်ပြည်နယ်ရှိTajikistanတန်ဇန်းနီးယား၏ယူနိုက်တက်သမ္မတနိုင်ငံထုိင္းႏုိင္ငံအရှေ့တီမောတိုဂိုအဘိဓါန် TokelauTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများTuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုယူနိုက်တက်စတိတ်မိုင်းနာ​​းပြင်ပကျွန်းများဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗင်နီဇွဲလား၏ Bolivarian သမ္မတနိုင်ငံဗီယက်နမ်Virgin Islands, ဗြိတိန်Virgin Islands, အမေရိကန်Wallis နှင့် Futuna-အနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ ဤစာကွက်လပ်မှာဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဥပမာ, name@example.com သင့်ရဲ့အပြည့်အဝအီးမေးလိပ်စာရိုက်ထည့်ပေးပါ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email လိပ်စာတစ်ခုခုကိုတတိယပါတီနှင့်အတူ shared မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
နေ့01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / လ010203040506070809101112 / ခုနှစ်1900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 မှားနေသော Input ကို
အလုပ်အကိုင် / အလုပ်အကိုင်:
အထွေထွေအင်္ဂလိပ် - ၁၅ နာရီကျူရှင်အထူးအင်္ဂလိပ်စာ - ၂၁ နာရီကျူရှင်နေ့လည်ခင်းသင်တန်း - ၆ နာရီကျူရှင်IELTS ညနေခင်းသင်တန်း - ၆ နာရီကျူရှင်Beginners နံနက်ခင်းသင်တန်း - ၄.၅ နာရီကျူရှင် မှားနေသော Input ကို
သငျသညျ join ချင်ပါတယ်ပေးသောသင်တန်းကိုရွေးချယ်ပါ။
နေ့01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / လ010203040506070809101112 / ခုနှစ်20192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 မှားနေသော Input ကို
ဥပမာ: သင်ယူချင်ပါတယ်စာမေးပွဲများကို (ပေ, FEC, CAE, CPE, IELTS?) သို့မဟုတ်အထွေထွေဆက်သွယ်ရေးဘို့။
ကျနော်တို့ homestay နေရာထိုင်ခင်းပူဇော်သို့မဟုတ်သင်ဗြိတိန်၌သင်တို့၏နေထိုင်ဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
နေရာထိုင်ခင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်အမျိုးအစားများအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအဆိုပါ homestay စာမျက်နှာများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
သင့်ရဲ့သင်တန်းစတင်သည်မတိုင်မီသင်ကစနေနေ့သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေပေါ်တွင်သင်၏ homestay မှာရောက်လာပေမည်။
ဝက်ဘုတ်အဖွဲ့အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာမိမိဘာသာကိုယ်တိုင်ယူစားသောက်ရခြင်းလူနေအိမ် / ဝိုင်အမ်စီအေ (တက္ကသိုလ်)သင့်ကိုယ်ပိုင်နေရာထိုင်ခင်း မှားနေသော Input ကို
မှတ်ချက်: လူနေထိုင်ရာ / ဝိုင်အမ်စီအေ (ယခင်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီနေတဲ့နေရာထိုင်ခင်းဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လသြဂုတ်လသင်တန်းများအတွက်သာရရှိနိုင်ပါ။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ homestay ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်မျှဆေးလိပ်သောက်အိမ်ထဲဆေးလိပ်သောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
နိမ့်ဆုံး Non-အမ်းသင်တန်းသိုက် GBP 1 ၏ 1 ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ကြေး + 50 ရက်သတ္တပတ်ရဲ့နေရာထိုင်ခင်း + နေရာထိုင်ခင်းဘွတ်ကင်ကြေးဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏အခကြေးငွေများအားလုံးကိုပေးချေရန်ရွေးချယ်ပါကအောက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်ပါ - x ရက်သတ္တပတ်၏အခကြေးငွေ (မည်သည့်လျှော့စျေးမဆို) + x ရက်သတ္တပတ်တည်းခိုခန်း + GBP ၅၀ နေရာထိုင်ခင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေ
သငျသညျ Credit Card ကို, ဘဏ် Tansfer, Check သို့မဟုတ်ငွေအားဖြင့်ပေးဆောင်စေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ '' ကိုဖတ်ရှုပါဘယ်လိုစာရင်းသွင်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ပေးဆောင်ဖို့ဘယ်လိုအဘို့ '' စာမျက်နှာတွင်။
ငါကိန်းဘရစ်ချ်, Central Language School တွင်ပေးထားသောရက်စွဲများကိုလေ့လာလိုကြောင်းအတည်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးသည်နှင့်ဤပုံစံနှင့်ဘရိုရှာ / ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအားလုံးကိုလက်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးသီးခြားစာတစ်စောင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမှ လွဲ၍ မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အာရုံကြောဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမှုမရှိပါ။
သငျသညျအထကျပါကြေညာချက်နှင့်အတူသဘောတူအတည်ပြုမှ tick ကျေးဇူးပြု.*
ငါသဘောတူ, ငါ့ကျောင်းအပ်ပုံစံကိုလက်ခံကျေးဇူးပြုပြီး! မှားနေသော Input ကို
ငါ CLS သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကိုဖတ်ပြီအတည်ပြုပါ။
သင် CLS သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီဖတ်ရှုပြီးကြောင်းအတည်ပြုရန် tick ကျေးဇူးပြု.*